लेख/रचना लेखनाथबारे केही लेख्दा... � गोविन्द भट्टराई उनको उमेरका दौंतरीको दिनचर्या हाई काढेर अनि तासका खालमा जमेर बित्ने गरेको छ । उनी भने बिहानदेखि बेलुकासम्म टायल उद्यममा व्यस्त छन् । राजनीतिक कुरा गरेर दिन बिताउने फुर्सद छैन । उनी हुन्� अर्घाखा�ची सिद्धारामा ०११ सालमा बुबा गजाधर बेल्वासे र आमा चन्द्रकलाको कोखबाट जन्मिएका लेखनाथ बेल्वासे । लेखनाथ अचेल कपिलवस्तु जिल्लाको बरकलपुर गाउ विकास समितिको इमिलियामा दीप सिमेन्ट टायल उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
आफू चौबिसै घन्टा उद्यममा समर्पित लेखनाथले सहयोगका लागि २ जनालाई स्थायी रोजगारी दिएका छन् । नपुग जनशक्ति आवश्यकताअनुसार ज्यालादारीमा (अस्थायी) परिचालन गर्ने गरेको बताए ।
बुबाकै पालामा कपिलवस्तु झरेका बेल्वासेले खैरेनीपुर, चनइमा आठ वर्ष उद्योग सञ्चालन गरेपछि हालको ठाउ� रोजेका हुन् । सिमेन्टका रिङ, रेलिङ, टायल, बाउन्ड्री पोललगायत घरमा प्रयोग हुने सामग्री उत्पादन गर्ने लेखनाथ व्यस्त रहेको बताउ�छन्, �माग पूरा गर्न सकेको छैन ।� कहा�कहाबाट आउछ माग ? जवाफ दिन्छन्, �चनई, बरकलपुर, हरिहरपुर, दुविया, महेन्द्रकोट, बुड्ढी, जयनगर, भलवाडलगायत ठाउ�बाट आउ�छ ।� यद्यपि, सबैजसो ठाउ�मा यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग छन् र पनि लेखनाथकै सामग्री खोज्दै आउनुको कारण ? रहस्य यस्तो रहेछ, �मेरो उत्पादन २० वर्ष ढुक्कै टिक्छ, किनकि पोखरीमा करिब १५ दिन डुबाएर मात्र बिक्री गर्छु । यसो गर्दा टुटफुट हुदैन ।�
पानीका लागि २५० फिट गहिरो नलकुप जोडेका छन् । २ वटा पोखरी छन् । बोरिङमा जस्तै १ इन्च पानी निरन्तर आइरहन्छ । बटुवासमेत चिसोपानी खान धुइरिन्छन् गर्मीमा । नजिककाले खडेरीमा धानको बीउ राख्न र तरकारीका लागि सि�चाइमा प्रयोग गरे ।
कति लाग्छ यस्तो उद्योग चलाउन ? बेल्वासे भन्छन्, �विदेश जान गरिने लगानीभन्दा बढी लाग्दैन । मैले एक लाख ४० हजार लगानी गरेको थिए� । ऋण तिरिसके� ।� टायल उद्योगअघि ०५० सालबाट कर्महनामा होटल गरेका उनले त्यसअघि चनईमा १० वर्ष होटल व्यवसाय गरेका थिए । होटल व्यवसाय र अहिलेको उद्योगमा के फरक छ ? उनी भन्छन्, �सिमेन्ट उद्योगमा आफू खट्नुपरेन तर होटलमा नखटे लगानी डुब्छ ।� हालको व्यवसायको फाइदाबारे उनको अनुभव छ, �गर्न सके टायल उद्योगबाट निराश हुनुपर्दैन । दुःख गरेर डेढ लाख हाराहारीमा जोगाउन सकेको छु । मेरो कमाइ त्यही हो । २ छोरा, ३ छोरीका पीता लेखनाथ उद्योगमा एक्लै रहनुपर्दा कहिलेकाही� दिक्क लाग्ने गरेको सुनाउ�दै कर्महनामा रहेका परिवारलाई अब सबै स�गै बस्ने प्रस्ताव राखेको सुनाउ�छन् ।
कुनै बेला भारत आसाम गुहावटीमा भारतीय सेनामा भर्ती हुन गएका बेला राति सोच आएछ उनलाई� योभन्दा घरमै फर्कन्छु । त्यसपछि फर्केर पेसा समाएको सुनाउ�छन् ।
घरबारी साहुको बन्धकी राखेर वा चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेश जान हतारिएका युवायुवतीलाई लेखनाथको सुझाव छ, �अर्काको मुलुकमा गएर पुर्परो समाती फर्कनुभन्दा देशमै उद्यम सुरु गरे राम्रो हुन्छ । धैर्यता र लगनशीलता भने चाहिन्छ ।�
कुन पार्टीमा सक्रिय हुनुहुन्छ भन्दा लेखनाथ भन्छन्, �उद्यमीको ठूलो पार्टी भनेको आफ्नै व्यवसाय हो ।� वैचारिक आस्था जुनकुनै पार्टीमा राखे पनि मिहिनेत गर्न छाडेर भाषणको भर पर्नु आफ�ैलाई धोका दिनु हो भन्ने बुझाइ रहेको छ उनको । तपाईंलाई पनि केही गरेर धन आर्जन गर्ने मन छ कि वा विदेशै लाग्ने विचार गर्नुभयो, उद्यम गर्ने मन भए एकपटक लेखनाथको पौरख अवलोकन गर्न जाने कि ? प्राप्त प्रतिक्रियाहरु	(0) यसमा तपाईको प्रतिक्रिया	(रोमनबाट युनिकोड नेपालीमा लेख्नुहोस्) नाम